Ninkii waday gaarigii ku qarxay Kaawa Godeey oo la qabaty + Sawirro - Caasimada Online
Home Warar Ninkii waday gaarigii ku qarxay Kaawa Godeey oo la qabaty + Sawirro
Ninkii waday gaarigii ku qarxay Kaawa Godeey oo la qabaty + Sawirro
Muqdisho (Caasimadda Online) – Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa Qarax khasaare geystay oo duhurnimadii maanta ka dhacay Isgoyska Kaawo-godey ee Degmada Wadajir, sida ay inoo sheegeen saraakiil ka tirsan Ciidanka Booliska.
Qaraxan oo loo adeegsaday Gaari walxaha Qarxa laga soo buuxiyay ayaa waxa uu si gaar ah uga dhacay Isgosyka Kaawo-godey ee Degmada Wadajir.
Waxaa jira Khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo ka dhashay Qaraxa oo loo adeegsaday gaari Nooca raaxadda ah oo la dhigay Igoyska Kaawo Godey.
Wasiirka amniga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Abuukar Isloow Ducaale ayaa SONNA u sheegay in dhagar ninkii waday gaariga gacanta lagu soo dhigay ka dib markii uu isku dayay inuu ka baxsado Ciidamada amniga.
Ciidanka ammaanka ayaa waxa ay xireen goobta uu Qaraxa ka dhacay, iyagoo dadka ku amraya in ay goobta ka fogaadaan.